Raharaham-pirenena Archives - Page 3 sur 296 -
Eny am-pelatanan’ny HCC ny baolina taorian’iny famoahana voka-pifidianana vonjy maika nihazakazahan’ny CENI fatratra iny. Voaporofo ary tsy azon’iza lavina intsony anefa ny hosoka faobe nanerana ny Nosy nandritra iny fihodinana faharoa iny… Maika hangatsiaka Nanampin-tsofina …Tohiny
Noporofoin’ ireo mpanohana an’i Marc Ravalomanana fa tsy azo hahodikodina ny safidin’izy ireo, antony nahatongavan’ny fahatongavana maro nandritra ny hetsika ny asabotsy teo teny amin’ ny parvis ny lapan’ ny tanana. Raha ny zava-nisy teny …Tohiny
Tsy mahazaka demokrasia, tsy mahazaka ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety… Izay no azo ilazana an’ingahy Andry Rajoelina ka nanehoany ny fomba ratsiny. Araka izany, notorian’ity filohan’ny Tetezamita eto aloha ity noho ny lahatsoratra an-gazety navoakany, ny …Tohiny
Manomboka sahady ny fampihorohoroana sy ny fanaovana “ramatahora” na dia mbola ilay vokam-pifidianana feno hosoka sy halatra ary tsy ara-dalàna no navoakan’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), ny 27 desambra teo. Toa vao …Tohiny
Tsy nanadino ireo ankizy ny vadin’ny Filoham-pirenena, Voahangy Rajaonarimampianina ao anatin’izao andro fety izao. Amin’ny maha renim-pianakaviana azy dia tao am-pony ny famalifaliana an’ireo ankizy marobe amin’ny maha fetin’ny ankizy ny fetin’ny noely. Nahitana hetsika ...Tohiny